Gebar soomaaliyeed oo kufsi loo geestay ayaa laga celiyey Australia – STAR FM SOMALIA
Ra’iisal Wasaaraha cusub ee Australia, Malcolm Turnbull, ayaa waxa uu si kooban kaga hadlay gabar Somaliyeed oo laga celiyay dalka Australia, xilli daryeel caafimaadeed looga soo qaaday Jazeerada Nauru, ka dib markii ay sheegtay in la kufsaday.
Ra’iisal Wasaaraha, ayaa sheegay in gabadhaasi ay ka hortimid in ilmaha laga soo rido, maadaama Australia loo keenay in daryeel caafimaad loogu sameeyo.
“Macluumaadka aan haayo waxaa weeye in haweeneydu ay bedeshay maskaxdeeda, ee ah wixii ay u joogtay Australia, waana intaa waxa dhan aan ka ogahay.” Ayuu yiri Ra’iisal Wasaaraha Australia.
Wasiirka Wasaaradda Socdaalka Australia, Peter Dutton oo la hadlay Warbaahinta, ayaa sheegay in gabadhu ay ogaansatay inaanan ilmaha laga soo ridin.
“Haweeneyda ayaa waxay go’aansatay in la joojiyo soo ridista ilmaha. Haweeneydu waxaa Australia loo keenay daryeel caafimaad, ee looma keenin inay sii joogto.” Ayuu yiri Wasiirku.
Siyaasiyiinta reer Australia, ayaa waxay si weyn kaga horyimaaden in dib loo celiyo gabar dhibana ah, oo u baahneyd gurmad caafimaadeed, iyagoona tallaabadaasi cambaareeyay. Hay’adaha ka shaqeeya xuquuqda bani’aadamka, ayaa sidoo kale cambaareeyay falkaasi, in gabari lagu celiyo dhul aanay ku badbaadeen.
Ian Rintoul oo ah abukaate u dooda dadka qaxootiga ah ee ku sugan Australia, ayaa waxa uu sheegay in Maxkamadda Sydney aanay awood u lahayn wax ka qabashada gabadha la celiyay.
21-kii bishii August, ayaa gabadhan laga qabsaday meel ku dhow xero qaxooti oo ku taala Jazeerada Nauru, waxaana kufsaday laba nin, markii ay soo qafaasheen. Muuqaal la soo geliyay barraha ay bulshada ku wada xiriirto, ayaa waxaa laga maqlaayay codka gabadha Somaliyeed oo caawinaad weydiisaneysa Booliska Nauru, xilli meel god ihi ay ku dhex jirtay iyo Booliska oo ugu baaqaaya inaanay ka cabsan, isla-markaana ay jooggaan halkii ay sheeganeysay inay ku sugan tahay.
Nauru waa Jazeerad dhacda Badweynta Pacific-ga, waxayna Australia geysaa muhaajiriinta cusub ee dalkeeda u imaanaya in magangelyo la siiyo, waxaana la tilmaamaa inay tahay tallaabo ay isaga qafiifinayso qul qulka qaxootiga.
Maamulka Nauru, ayaa ku hawlan sidii uu Maxkamad ku horkeeni lahaa gabadhaasi, maadaama sida ay sheegeen ay ka been sheegtay kufsiga ay sheegatay in lagula kacay.
Wararka5 mins ago